Sidee loo difaaci karaa webiyada Soomaaliya la wadaagto Itoobiya iyo Kenya? Dr Cabdulqaadir Maxamed Tahlil – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Webiyada Jubba iyo Shabelle waxay ka asalmaan Ethiopia, biyaha ay Somalia keenaan 90% waxay ka soo rogmadaan buuraha bariga Ethiopia. Kenya iyo Ethiopia waxaan la wadaagnaa webiga Dawa ku darsama webiga Jubba.
Kadib wadahadalo, hindise heshiisyo iyo wacyigelin soo socotay muddo 40 sano ah, waxaa Golaha Guud ee Qaramada Midoobay u suurogashay in 136 waddan ay ku shiriso New York, 1997 si loo saxiixo heshiiska Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourse, oo loo soo gaabiyo UN Watercourses Convention. 106 ayaa ogolaadey in ay saxiixaan heshiiska, 3 waddan ayaa diiday (Turkey, China iyo Burundi) 27 waddan waa ka aamuseen (Ethiopia iyo Masar ayaa ka mid ah). Heshiisku si uu u dhaqangalo wuxuu u baahnaa in ugu yaraan 35 waddan ay soo ansixiyaan (ratification). 17 sano ayey qaadatey in la helo 35 ratification. Heshiisku wuxuu dhaqangaley 17.04.2014 kadib markii Vietnam ay noqotay waddankii 35aad ee soo ansixiyey heshiiska caalimiga ee biyaha macaan ee soohdimaha jeexa.
Ma jiro waddamada Africa Bari mid ansixiyey heshiiskaan (ratification), laakiin waxaa saxiixay 1997, Kenya, Djibouti iyo Sudan. Ethiopia iyo Tanzania waa ka amuseen. Uganda iyo Somalia waa ka maqnaayeyyn shirka. Hadda Kenya iyo Tanzania waxay wadaan in ay ku biiraan heshiiska (accession).
IGAD wax ay waddaa barnaamij ay ugu sameynayso waddamada xubnaha ka ah siyaasad loo dhan yahay oo ku saabsan isticmaalka iyo ilaalinta kheyraadka biyaha la wadaago. January 2015 waxaa Addis Abeba lugu saxiixay Igad Regional Water Policy oo soo xiganaaya mabaadii’da guud ee UN Watercourses Convention. Waxaa la wadaa hadda dhameystirka Protocol-kii lugu dhaqan gelin lahaa policy-ga (Ethiopia ayaa hortaagan habsami u socodka ansixinta protocol-ka, inkastoo aysan si official ah u sheegayn).
In wadatashiga iyo iswargelintu ay tahay waajib xeerka caalamka u dhigan ah, waxaa ka markhaati ah wargelintii Somaliya ay wargelisay Ethiopia markii uu socday mashruucii biyo xireenka Baardheere 1987. Mashruucaas hay’addii maalgelineysay (World Bank), ayaa Somaliya u sheegtay in ay Ethiopia iyo Kenya wargeliso maadaama ay yihiin wadamada Qulqulka sare (upstream) oo xaq u leh in ay talo ka dhiibtaan mashruucii saameyn ku yeelan kara baahidooda. Somalia waxay ka codsatay World Bank in ay la xiriirto Ethiopia, maadaama xiriirka labada waddan uusan fiicnayn wakhtigaas. Ethiopia markii ay heshay warqaddii World Bank-iga ee mashruucii Baardheere, waxay ku soo jawaabtey diidmo qayaxan, ayadoo ku andacooneysa in Baardheere Project ay carqalad ku tahay mashaariic ay ayadu horey u qorsheysay oo isticmaali lahaa biyaha webiyada Ethiopia ee Jubba biyaha siiya. World Bank ayaan ku qancin jawaabta Ethiopia, wuxuuna magacaabay guddi khuburo ah oo seddex qof ka kooban (2 injineer iyo hal sharciyaqaan) si ay daraasaad ugu sameeyaan cabashada Ethiopia. Gudigii khuburadu wuxuu soo saarey warbixin caddeysay in mashruuca Baardheere uusan wax saameyn ah ku lahayn baahida ay Ethiopia sheeganeyso. Kadib, World Bank wuxuu fasaxay lacagtii lagu maalgelin lahaa biyoxireenkii Baardheere. Laakiin casharka halkaas aan ka baraneyno waxaa weeye in Ethiopia ay aqoonsatey in iswargelinta (obligation to notify planned measures) mashariicda la qorsheynaayo in la hirgeliyo, oo isbedel ku sameyn kara tayada iyo tirada biyaha, ay tahay waajib xeer caalami ah.
Hoos ka daawo qaar ka mid ah xiriiriye-yaal (Links) la xariira qoraalo ay horay UN uga sameysay arrimaha la xariira biyaha caalamiga ah:
La taliyhii hore sharciga ee Wasaradda Tamarta iyo Biyaha Jamhuuriyadda Federalka ee Soomaaliya